Alaska Casinos│Sports News Headlines Global Articles WebSite.WS | Gvmg - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
Alaska is better known for extreme climate over much else. Touting an environment that goes from extreme winter weather to harsh, dry, summer climates, many of the activities in Alaska are centered on the great outdoors. Wildlife is abundant, whale watching and Alaskan cruises have become the stuff of dream vacations, and the resources found in Alaska are known for being unrivaled. There are close to 650,000 residents living in Alaska, which is the largest state in the U.S. There are at least 365,039,104 acres of land in Alaska, and much of it is devoted to primitive, wilderness areas. This is part of the reason that being outdoors is an important aspect of Alaskan culture. သို့သော်, indoor fun is not to be discounted in Alaska as Alaska casinos provide quiteabit of entertainment around the state. Many of the Alaska casinos are owned and operated by Native American tribes. Alaska casinos are spread out all over the state and most offerabreak from the outdoors for some fun and excitement inside. The Atka Ira Council isacasino in Alaska, located in Atka. The casino specializes in bingo and also boastsabed and breakfast as well asaloaded snack bar. CBJ Bingo, run by the Tlingit and Haida Indians, is another large bingo facility operating in Alaska. This Alaska casino is located in Juneau and has one of the largest bingo operations in the state. Other Alaska casinos featuring large-scale bingo operations include: Klawock IRA Pull Tab Shoppe, located in Klawock and Sitka Tribal Bingo in Sitka. These casinos serve the needs of the community around them by offering entertainment in the form of the easy-to-learn, lucrative game of bingo. Bingo is the draw and focus of most Alaska casinos. One of the more unique Alaska casinos is the Shoonagac Tribal Bingo, located in Kodiak. This Alaska casino features total slots as well as bingo. While there are not an abundance of Las Vegas-style casinos located in Alaska, there areanumber of medium-scale Alaska casinos specializing in gambling ventures like bingo, which are low-profile games, but fun and exciting just the same. The laid-back attitude of Alaskans can be demonstrated in the laid-back vibe of Alaska casinos. They are just as much fun as their large-scale, flashy counterparts and perfect for the population of this large, but low-key, ပြည်နယ်. Alaska Casinos
တိုနီရို : 2001 နေ့ပုံမူကြမ်း
Wing Chun – တရုတ်ကိုယ်ခံပညာ
အရာအားလုံးနှင့်အတူလူများအတွက် LED မီးအိမ်နှင့်အခြား Gadgets
Alaska ခုနှစ်တွင်ငါးဖမ်း – အိပ်မက်အကောင်အထည်ပေါ်ပြီ
အလက်စကာတွင်ငါးဖမ်းခြင်းသည်ငါးဖမ်းသမားတစ် ဦး အတွက်အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်သည်. လေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှင်းသည်. ရေသည်တောက်ပနေပြီးထိုရေတွင်တည်ရှိသည်မှာရာနှင့်ချီသောလူများသည်သူတို့၏ဘ ၀ ကိုအကောင်းဆုံးငါးဖမ်းရန်အတွက်ပြည်နယ်သို့စုရုံးရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။. ကုန်းမြေကိုမကြားဘူး 35 ဤနေရာတွင်ဘုရင်ဆော်လမွန်ပေါင်နှင့်ရေထဲ၌စုရုံးနေသောငါးများကိုသင်အံ့သြလိမ့်မည်. တကယ်တော့, သငျသညျထိုရှငျဘုရငျကိုဆော်လမွန်အထိမှာဖမ်းနိုင်ပါတယ် 50 အလေးချိန်ပေါင်! သင် halibut အပါအဝင်ကြီးမားသောငါးများကိုလည်းတွေ့လိမ့်မည်, မြောက်ပိုင်းပိုက်, မင်္ဂလာပါ, shiner ပုံမှန်အတိုင်း, အင်္ဂလန်, မြောက်အတ္တလန္တတိတ်ငါးသလောက်တစ်မျိုး, နှင့်များစွာသော, အများကြီးပို. ကော့ဒ်, ရေ, ငါးခွေးလျှာ, ကဏန်းနှင့်ပုစွန်များသည်သင့်အတွက်စုစည်းနေခြင်းဖြစ်သည်. ဘယ်မှာသူတို့ကိုရှာပါ, သင် Alaska ၏အရှေ့တောင်ဒေသကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်. ဤနေရာတွင်ငါးမျှားရန်နေရာများစွာရှိပြီးသင်လိုက်နေသောငါးမျိုးစိတ်များကိုသာသင်ပစ်မှတ်ထားနိုင်သည်. ဤသည်မှာအလာစကာ၏ပူနွေးသောဆောင်းရာသီဒေသလည်းဖြစ်သည်. ဒါပေမယ့်, နေဆဲနွေရာသီအေးမြခြင်းနှင့်ပြောင်းရွှေ့အပေါ် halibut ရဘို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ကြသည်. ဆော်လမွန်ကဒီမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်သင်လည်းဤနေရာတွင်ရောက်ရေချိုငါး၏ကျယ်ပြန့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်. Bristol ဂလားပင်လယ်အော်နှင့် Cooper မြစ်ကြားရှိငါးအမြောက်အမြားကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်. သငျသညျကိုလကျအောကျခံနှင့်သမုဒ္ဒရာငါးများအတွက်ကမ်းရိုးတန်းရေကိုလည်းငါးမျှားနိုင်ပါတယ်. Lower Cook Inlet ကိုသေချာစစ်ဆေးပါ. ဤသည်မှာသင် Dolly Varden ကိုရှာတွေ့နိုင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, ဆော်လမွန်အမျိုးအစား. သင်တို့သည်လည်းဤဒေသတွင်လည်းရောက်ရေချိုငါးရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်. ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်တွင် halibut နှင့် salmon အဘို့အ clam တွေငါးတွေတူးလို့ရပါတယ်. နောက်ထပ်ကောင်းမွန်သောတည်နေရာသည်အနောက်နှင့်အာတိတ်ဒေသများဖြစ်သည်. သငျသညျရောက်ရေချိုငါးသင်၏ဝစွာဖမ်းပါလိမ့်မယ်, ပိုက်, မီးတောက်, ဤနေရာတွင် char နှင့် burbot. သင်နှင့်အတူဘာကိုယူသွားမလဲအကယ်စင်စစ်သင်သည်သင်၏ကြိမ်လုံးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, သင် ဦး တည်ရာပေါ်မူတည်။ ရေချိုနှင့်ဆားငန်. သင်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုထင်သည်ထက်နှစ်ဆတာကိုင်တွယ်ယူသေချာအောင်လုပ်ပါ. ယင်ကောင်, အလေး, ဆွဲဆောင်, ပိုက်ကွန်, အများအပြားအမျိုးအစားများငါးဖမ်းလိုင်း, အဖြစ်သဖြင့်, တော, မြေပုံများ, နှင့်သံလိုက်အိမ်မြှောင်လည်းလိုအပ်သည်. သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီပေးရေးကိရိယာကိုသိုလှောင်ထားပါ။ သင်ငါးထွက်ခွာနိုင်လျှင်ရေအလုံအလောက်ထည့်ပါ! အဝတ်အစားအတွက်, မင်း Alaska မှာရောက်နေတယ်နင်နွေးထွေးတဲ့အဝတ်အစားလိုတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့, ငါးဖမ်းအင်္ကျီ, နေကာမျက်မှန်, စာအုပ်တွေ, bug ကိုတွန်းလှန်နှင့်နေရောင်ကာကွယ်ဆေး. မှန်ကန်သောငါးဖမ်းခွင့်လိုင်စင်များလည်းရရှိရန်စစ်ဆေးပါ. ဤအရာသည်သင်ဖမ်းမိမည့်ငါး၏အရွယ်အစားကိုဖော်ပြရန်မဟုတ်သောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနေရာများဖြစ်သောကြောင့်သင်၏ကင်မရာကိုမမေ့ပါနှင့်! ငါးစာဘို့, တိုက်ရိုက်ငါးစာ၏ကျယ်ပြန့ကိုယူပါ. ဒီပုစွန်ဖြစ်နိုင်တယ်, ည crawlers, ရေချိုကျောက်ပုစွန်, နှင့်ငါးသင်တုန်း. အေးခဲနေသောငါးစာကိုလည်းရှာပါ. အတု၌တည်၏, ဆွဲဆောင်များအပါအဝင်ကျယ်ပြန့်သင်နှင့်အတူယူပါ, ယင်ကောင်, ချော, ဇွန်းနှင့် spinners. သငျသညျတတ်နိုင်လျှင်areaရိယာမှသဘာဝနည်းနည်းအဘို့အသွားပါ. သင်theရိယာ၌ဝယ်ယူရန်နေရာအများအပြားရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်သင်သင်တန်းသင့်ကိုယ်ပိုင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်. ငါးစာကျော်မနေပါနဲ့. Alaska အတွက်ငါးဖမ်းဖို့ချွတ် ဦး တည်သည့်အခါ, သင်နှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ် ဦး ကိုယူ။ သို့မဟုတ်ခရီးစဉ်စာအုပ်ဆိုင်မှမကြာခဏပညာရှိဖြစ်ပါတယ်. ဤသူများသည်သင်၏ငါးဖမ်းနေသောနေရာများရှိလျှို့ဝှက်နေရာများကိုရှာဖွေနိုင်သည်. ပြီးတော့, သူတို့ကသင်ထွက်ရှိအကောင်းဆုံးငါးအချို့တွေ့မြင်ကြောင်းသေချာစေနိုင်သည်. အွန်လိုင်းနေရာအချို့ကိုစစ်ဆေးပြီးအဖွဲ့အစည်း၏အရည်အသွေးကိုအာမခံထားရန်အချိန်ယူပါ. ထိုအခါ, သင့်ဘဝ၏အကောင်းဆုံးငါးမျှားရန်လှပသောအလက်စကာနိုင်ငံသို့သွားပါ. Alaska ခုနှစ်တွင်ငါးဖမ်း – အိပ်မက်အကောင်အထည်ပေါ်ပြီ
When you have your nitro fuel ready for your RC car, the next thing you need to know is how to keep it in proper storage. But when you have already decided the blend of fuel you want to use for your car’s engine, it’s also important to make sure that the fuel you have selected is working properly or in other words, easily tunes your car. If it doesn’t do that or if for some reason there are problems in running your car, don’t even think twice in changing the fuel. On with what should be done for nitro fuels. It’s advisable to always keep the fuel in lock tight containers. A good explanation for this is evaporation. The reason is because when the air gets in the container, it’ll cause evaporation or condensation which could ruin the fuel. ဒီဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါ, the damage on your engine’s car could cause you your exhaust systems since the engine will run too hot. ဒါ့အပြင်, avoid storing your fuel inaroom where temperature varies almost constantly. This will still damage the fuel and since it’s advisable to maintain the normal state of your fuel, be sure that it doesn’t shift to hot and then cold and hot again every other hour when it comes to room temperature. Another factor important for fuel storage is the light. You have to make sure that you keep your fuel away from the light. If you expose your fuel to direct sunlight or inabright room, the nitro methane ingredient in the fuel will degrade and this will cause poor running condition of your RC car later on when put in use. Be sure that you keep the fuel inacool, dark place with stable temperature. နှင့်သင်တန်း၏, when you have been keeping fuel for more thanayear or more thanayear, it’s better to dispose it. Using fuel kept for an indefinite time may cause harm to your car’s engine and the guarantees offered by manufacturers would have surely lapsed already so there’s no point in keeping an old fuel. Make sure you replace yours regularly. Storing Nitro Fuel
Hydration ဂီယာအပြေး! ရေကောင်းရေသန့်စနစ်ကမော်တာကိုပုံမှန်လည်ပတ်စေသည်
လာမယ့်မာရသွန်အတွက်ပြင်ဆင်နေသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်, သို့မဟုတ်အပန်းဖြေအပြေးပွဲ, သင်၏အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပြည့်အ ၀ ဓါတ်ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းထားရန်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းသင်သိသည်. သင်မည်သည့်နေရာတွင်ပြေးနေပါစေ, စနစ်တကျလည်ပတ်ထားသောရေစီးရေလည်ပတ်မှုစနစ်သည်သင့်အား၎င်းပန်းတိုင်ကိုလုံခြုံစွာဖြတ်ကျော်နိုင်ရန်ကူညီရာ၌အရေးပါသောအားဖြည့်မှုဖြစ်နိုင်သည်! အပြေးသမားများအတွက်မျှတသောစွမ်းဆောင်ရည်သည်အလွန်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်, သင့်လျော်သောအရှိန်အဟုန်ကိုထိန်းသိမ်းရာတွင်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုအဆင့်သည်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်, နှင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကပြောနေသည့်သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များကိုဖတ်နိုင်ရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုထိန်းသိမ်း. ထို့ကြောင့်အားကစားအ ၀ တ်အထည်များနှင့်အပြေးပစ္စည်းကိရိယာများသည်လေးနက်သောအပြေးလေ့ကျင့်သူများအတွက်လေ့ကျင့်ပေးသကဲ့သို့အရေးကြီးသည်. ရေထုထည်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဆက်စပ်ပစ္စည်းသည်အပြေးသမားများအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်’ အပြေးသမားတစ် ဦး ချင်းလိုအပ်သောအဆင့်တွင်ခံနိုင်ရည်ရှိရန်အားကစားပစ္စည်းများပေါင်းစပ်ခြင်း. များစွာသောဒီဇိုင်းများသည်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေးရုံသာမကလက်ရှိရရှိနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်လည်းသက်သာခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုဆက်ကပ်. ရှည်လျားသောအကွာအဝေးအပြေးနေစဉ်, သို့မဟုတ်တိုတောင်းသောတောင်တန်းလမ်းကြောင်းပြေးယူပြီး, သင်စိုးရိမ်ပူပန်လိုသည့်နောက်ဆုံးအရာမှာသင်၏ရေထုပ်သည်မှန်ကန်စွာကိုက်ညီလျှင်ဖြစ်သည်, နှင့်ဂီယာအကြောင်းအရာအားလုံးသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကျော်ပြောင်းလဲနှင့် bouncing မဟုတ်ပါဘူး. ယုတ်ညံ့ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းများနှင့်အတူ, သင်ပိုမိုစိတ်ပျက်တွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်, နှင့်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်သင်၏ပုလင်းဂီယာအာရုံစိုက်အတူ, သင်၏လှုပ်ရှားမှုမဟုတ်ပါ, သင်သည်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပယ်ပစ်ရန်သင့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်, သို့မဟုတ်ပင်ပိုဆိုး, သင့်ကိုယ်သင်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်သည်. <ခ>Hydration Packs များကိုအထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော Running Systems များဖြစ်သည်!</ခ> သင့်လျော်သောပြေးဖိနပ်လိုပဲ, အားကစားအဝတ်အစား, နှင့်ထိုကဲ့သို့သော pedometer အဖြစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း, အားလုံးတွင်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအထောက်အကူပြုရန်သင်လိုချင်သောအင်္ဂါရပ်အချို့ရှိသည်. သင်သည်သင်၏ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းရန် pack ကိုရွေးချယ်သည့်အခါအလားတူသက်ဆိုင်ပါသည်, အားလုံးထုပ်တန်းတူဖန်တီးကြသည်မဟုတ်သောကြောင့်, ထို့အပြင်၎င်းတို့တွင်လျှောက်လွှာတွင်ကွဲပြားမှုရှိနိုင်သောအင်္ဂါရပ်များရှိသည်. သင့်အတွက်မှန်ကန်သောလည်ပတ်မှုစနစ်ကသင်မည်သည့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုအဆင့်ကိုလိုအပ်သည်နှင့်မည်သည့်သက်တမ်းကိုရှာဖွေမည်ကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်. သင်တစ် ဦး မြန်နှုန်း Walker နေလျှင်, ရေပုလင်းတွေပါတဲ့အထုပ်တွေလုံလုံလောက်လောက်ရှိမယ်လို့သင်ခံစားရလိမ့်မယ်, သို့သော်, သငျသညျအပြည့်အဝထွက်ရှည်လျားဝေးလံသောအပြေးသမားဆိုရင်, ပုလင်းရှိခြင်းအတားအဆီးဖြစ်နိုင်သည်, နှင့်ဆီးအိမ် / ရေလှောင်ကန်စနစ်နှင့်အတူပိုမိုတည်ငြိမ်ခါး pack ကိုပြောင်းပါ, သင်၏ခြေလှမ်းများတက်လာခြင်းကိုကာကွယ်ပေးမည့်ချိန်ညှိနိုင်သည့်အင်္ဂါရပ်များလည်းပါရှိသည်, သင်ရေဓါတ်အားဖြည့်စနစ်တွင်သင်ရှာနေသည့်အတိအကျဖြစ်နိုင်သည်. သတင်းကောင်းကမယုံနိုင်လောက်အောင်နည်းပညာနှင့်ဒီဇိုင်းဖြင့်ဖြစ်သည်, သင်၌ယခင်ကထက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်, ပြီးတော့အပြင်ပန်းအားကစားကောင်းတဲ့အပြင်အားကစားတွေကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာ, သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းအိတ်ပေးသွင်းသူများ, သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောမှန်ကန်စွာပြေးနိုင်သော pack ကိုရှာဖွေရန်သင်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ. အားကစားသမားတစ် ဦး အနေနှင့်, ကောင်းမွန်သောပြေးနေစဉ်အတွင်းအာရုံစူးစိုက်မှုအဆင့်များကိုထိန်းသိမ်းရန်အရေးကြီးပုံကိုကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်, သင်၏လိုအပ်သောအာရုံကိုဆက်ထိန်းထားရန်သင်၏စိတ်ကိုလိုအပ်သောအခြားအားကစားလှုပ်ရှားမှုတစ်ခု. သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်အကောင်းဆုံးဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းသည့်ကိရိယာများရှိသည်, မည်သည့်အားကစားအတွက်မဆိုသင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုအဆင့်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်. သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပြည့်အ ၀ ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည်သင်နှင့်သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်သေချာသည်, ထို့ကြောင့်သင်၏လည်ပတ်နေသော Hydration pack ကိုရွေးချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါအလျှော့ပေးလိုက်လျောမှုမရှိသင့်ပါ! Hydration ဂီယာအပြေး! ရေကောင်းရေသန့်စနစ်ကမော်တာကိုပုံမှန်လည်ပတ်စေသည်
စုစုပေါင်းဂေါက်သီးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ဂေါက်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် Stretch အစီအစဉ်
ဂေါက်သီးလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ဆန့်. ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဂေါက်သီးကြံ့ခိုင်ရေးပရိုဂရမ်များအားလုံးကိုအွန်လိုင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဂေါက်သီးဂလိုင်းဖောက်သည်များနှင့်ပေါင်းစပ်သည်. ဒါဟာဂေါက်သီးလျင်မြန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာလွှဲတိုးတက်စေရန်အဆုံးစွန်ပေါင်းစပ်ပါပဲ. ဂေါက်သီးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လမ်းပိုင်းများမပါဝင်သောဂေါက်သီးသမားများအတွက်ကြံ့ခိုင်ရေးအစီအစဉ်သည်ကောင်းသောအရာထက် ပို၍ အန္တရာယ်ရှိသည်. ဂေါက်သီးကစားသူများသည်ဂေါက်သီးလွှဲနှင့်တိတိကျကျပြောင်းလဲနိုင်သောစွမ်းအားကိုရောစပ်ရန်လိုသည် 18 တွင်း. ဂေါက်သီးရိုက်တာကိုသာဆန့်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကြားရတယ်. ဒါကအမှားကြီးတစ်ခုပဲ! အားဖြည့်ခြင်းမရှိဘဲဆန့်ခြင်းသည်အမြဲတမ်းရွေ့လျားမှုတိုးတက်မှုနှင့်တူညီမှုမရှိပါ. အစွမ်းသတ္တိမရှိသောတစ် ဦး Over- ဆန့်ကြွက်သားဒဏ်ရာများအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖွင့်လှစ်. ဒါကြောင့်ဂေါက်သီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်လမ်းပိုင်းသည်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်. ဂေါက်သီးလေ့ကျင့်ခန်းတိုင်းအတွက်, သင့်လျော်တဲ့လမ်းပိုင်းရှိပါတယ်. ဤချဉ်းကပ်နည်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်တင်းမာမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေသည့်ခွန်အားကြီးမားသောလွှဲတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မည်. ဂေါက်သီးလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်ဆန့်ခြင်းဥပမာတစ်ခုသည်ခွန်အားကိုပြန်မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်သည်, ပြီးတော့မင်းရဲ့နောက်ကျောမှာလဲလျောင်းနေတယ်, သင်၏ဒူးကိုဖမ်းပြီးသင်၏နောက်ကျောကိုရင်ဘတ်ထဲသို့ဆွဲတင်လိုက်သည်. ဒါကသင်၏နောက်ကျောအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ်. ဒါကသင်၏ဂေါက်သီးလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုလုံးကိုမည်သို့ချထားသင့်သနည်း. နှင့်သတိထားမိ, ဒါဟာတ ဦး တည်းသို့မဟုတ်အခြားဘယ်တော့မှပါပဲ. နှစ်ခုလုံးပါ! သငျသညျအစဉျအမွဲ both'run ထည့်သွင်းမထားဘူးသူတစ် ဦး ဂေါက်သီးကြံ့ခိုင်ရေးသင်တန်းဆရာကိုဖြတ်ပြီးလာလျှင်! ဒါကသင့်အတွက်အစီအစဉ်မဟုတ်ပါဘူး. မည်သည့်ပညာရှင်မဆိုခေါင်းစဉ်နှစ်ခုလုံးကိုဖော်ပြသင့်သည်, တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ. ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းနှင့်ဆန့်ထုတ်ခြင်းအစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သတ်၍ သင်ဗဟုသုတအနည်းငယ်ရရှိခဲ့သည်. စုစုပေါင်းဂေါက်သီးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ဂေါက်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် Stretch အစီအစဉ်
လက်လီရောင်းချသူများအနေဖြင့်ဈေးနှုန်းမတက်မှီစားသုံးသူများသို့မရောင်းချမီကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်ပေးရသည်. များစွာသော add လိမ့်မည် 30 ရန် 50% အမြတ်အစွန်းရနိုင်စေရန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များကိုချွေတာပြီးနောက်အများပြည်သူသို့ရောင်းချပါ. ကံမကောင်းစွာပဲ, ဤစတိုးဆိုင်များရောင်းချသို့မဟုတ်အထူးနှုန်းများရှိသည်သောနေ့စဉ်မဟုတ်ပါဘူး. အကြောင်းမှာကုမ္ပဏီသည်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများကိုအမြဲမှီခိုနေမည့်အစားပုံမှန်ပစ္စည်းများရွေ့လျားအောင်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ရောင်းအားကိုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်. ဒါကလက်လီအရောင်းဆိုင်၏အမြင်ဖြစ်ပါတယ်, အရာသာမန်ဖောက်သည်ထံမှအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်. ဤလူတစ် ဦး ချင်းစီသည်လိုချင်သောတစ်ခုတည်းသောအရာသည်ကောင်းစွာသုံးစွဲထားသောငွေအတွက်တန်ဖိုးရှိသောအရာတစ်ခုခုကိုဝယ်ယူရန်ဖြစ်သည်. ဤနှစ်ခုအစဉ်အဆက်မျက်စိမှမြင်နိုင်ပါသလား? ၎င်းသည်မကြာခဏမဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော်အားကစားအဝတ်အစားများနှင့်အထူးလျှော့စျေးရလိုသူများသည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့မဟုတ်ဤ ‘ဂိုဒေါင်စတိုင်ကိုရောင်းသူများအား၎င်းကိုဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့ဝယ်ချင်ကြသည်။’ ဤဖြစ်ရပ်များသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမျိုးမျိုးကိုသယ်ဆောင်ပြီးများသောအားဖြင့်ပုံနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်မီဒီယာများတွင်ကြော်ငြာလေ့ရှိသည်. ဤအရာအချို့သည်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုသို့မဟုတ်တစ်နာရီခန့်မောင်းနှင်မှုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်းပစ္စည်းများစွာကိုဈေးလျှော့စျေးဖြင့် ၀ ယ်ပါကကျိုးနပ်ပါသည်။. အင်တာနက်သည်လူတစ် ဦး စစ်ဆေးနိုင်သောကောင်းမွန်သောဆိုဒ်အချို့လည်းရှိသည်. လူတစ် ဦး ချင်းသည်ရရှိနိုင်သမျှကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်အကြွေးဝယ်ကဒ်ဖြင့်ငွေပေးချေနိုင်သည်, သောထို့နောက်နှစ်ခုမှသုံးရက်အတွင်းတင်ပို့လိမ့်မည်. ဤနေရာများတွင်ရောင်းချသောထုတ်ကုန်များသည်အလွန်အကျွံကုန်ခြင်းသို့မဟုတ်အနည်းငယ်သောချို့ယွင်းချက်များရှိနိုင်သည်. လူများသည်သတိပြုမိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းကိုမြင်သောသူများက၎င်းစျေးနှုန်းနှင့်မတူပါ. လူများသည်ဤစတိုးဆိုင်များတွင်ပိုမိုကြီးမားသောလျှော့စျေးများအတွက်ပင်ညှိနှိုင်းနိုင်သည်. ဒီနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းကိုဆိုလိုသည်သော်လည်း, နောက်ဆုံး၌၎င်းကိုသာပြောသောနိမိတ်တစ်ခုရှိလျှင်ပင်ထိုက်တန်သည် 10 ဒါမှမဟုတ် 20% ပေးထားသည်. အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်ထွက်ပေါက်စတိုးတွေ့ရှိပြီးတာနဲ့, ၎င်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်တည်ရှိသည်သို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရမည်ကိုမှတ်မိရန်ကောင်းသည်. အချို့ကဒီကိုအခမဲ့ပေးလိမ့်မယ်၊ တချို့ကနည်းနည်းအားပေးရမယ်. အဲဒီနည်းလမ်း, ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူမှ ၀ င်ရောက်လာပြီးပစ္စည်းများကိုထပ်မံရယူနိုင်ရန်အတွက် ၀ န်ထမ်းအသစ်များနှင့်အထူးဖြစ်ရပ်များကိုလူတစ် ဦး ချင်းစီအားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်. အားကစားအဝတ်အစားအတွက်ပင်မည်သူမျှလျှော့စျေးကိုငြီးငွေ့မည်မဟုတ်. ၎င်းသည်ရှာဖွေရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုရှာတွေ့သောအခါအားလုံးကောင်းလိမ့်မည်. အားကစားအဝတ်အစားအတွက်အထူးလျှော့စျေး
သငျသညျနောက်ကျငါးဖမ်းသွားဖို့စဉ်းစားဖူးလား? ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစမ်းကြည့်ပါနဲ့. သင်လုပ်ချင်သမျှသည်သင်အကြိုက်ဆုံးငါးဖမ်းလှောင်ကိုကိုင်ထားစဉ်နှင့်နေလောင်ခြင်းတွင်ပျော်မွေ့လိုလျှင်သင်၏ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရန်မလိုပါ. သင်၌မှန်ကန်သောဗဟုသုတမရှိပါကရေထဲ၌သွားပြီးသင်၏လိုင်းကိုမချနိုင်ပါ, သင်အမှန်တကယ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခြေခံများပင်. လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကသင့်ကိုပျော်ရွှင်မှုများစွာပေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတောင်ဘေးကင်းလုံခြုံတာကပိုကောင်းပါတယ်. ငါးဖမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးလေ့လာပါ, သင်လိုအပ်သည့် tools များ, တစ်လိုင်းချ။ အတွက်နည်းစနစ်, ငါးဖမ်းခြင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိငါးဖမ်းသမားများထံမှငါးဖမ်းအကြံဥာဏ်များ, ငါးဖမ်းနေစဉ်အတွင်းသင့်လျော်သောအပြုအမူများကိုလေ့လာပါ. အကယ်၍ သင်သည်ရေfisရိယာကိုသာငါးမျှားသည်ဆိုပါကသင်ကံကောင်းသည်ဟုယူမှတ်ပါ, ဒါပေမယ့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ်, သင်အခြားသို့မဟုတ်နှစ် ဦး ကိုအခြား angler နှင့်အတူမျှဝေပါလိမ့်မည်. ငါးမျိုးစိတ်အမျိုးမျိုးအတွက်ဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့်သင်သည်သူတို့၏တည်နေရာအတိအကျကိုသိရန်လိုအပ်သောအမျိုးအစားဖြစ်သည့်အခါသူတို့သည်လည်းသူတို့အာရုံစိုက်သင့်သည်. အကယ်၍ သင်သည်ဖမ်းဆီးရမိသူများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောinရိယာတွင်ငါးဖမ်းနေပါကငါးပြာဖမ်းရန်သင်၏အချိန်ကိုဖြုန်းတီးလိုမည်မဟုတ်, လိုချင်ပါတယ်? မင်းရဲ့အကြိုက်ကိုသိပါ. ရေချိုသည်သင့်အတွက်ငန်ငန်သောရေသည်အရေးကြီးပါသလား? အချိန်အတော်ကြာသင့်ရည်မှန်းချက်ကိုအချိန်ယူပြီးစဉ်းစားပါ၊ သို့မှသာသင်၏ငါးဖမ်းအစီအစဉ်တစ်ခုလုံးကိုရှုပ်ထွေးသွားစေမည်မဟုတ်ပါ. တိကျတဲ့ငါးဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာသိဖို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့, သင်လည်းရေအခြေအနေကိုလေ့လာရန်လိုအပ်လိမ့်မည်. အစပိုင်းမှာဘာပေးသလဲဆိုတာကိုပြောဖို့ခက်နိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်ရေရှည်မှာ, သင်ငါးမျှားချင်သောရေကိုပိုကောင်းလိမ့်မည်. သငျသညျငါးမျှားကြည့်ရှုသကဲ့သို့လွယ်ကူသည်မဟုတ်ထင်လိမ့်မယ်. သငျသညျအကွောငျးကိုစောစောတတ်နိုင်သမျှအကြောင်းအဖိုးတန်အချက်အလက်များသင်ယူခြင်းမပြုလျှင်ဒါဟာမဟုတ်ပါဘူး. သင့်တွင်သုတေသနအတွက်သင်လိုအပ်သောအချိန်အားလုံးရှိသော်လည်း, သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရာများကိုလည်းလုပ်ဆောင်ရန်သေချာစေပါ. ဒါဟာသင်၏ကင်မရာရှေ့တွင်သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးဖမ်းကိုင်ထားရန်တကယ်ကွဲပြားခြားနားသောခံစားချက်ပါပဲ. ငါးဖမ်းခြင်းမတိုင်မီသုတေသန
ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ – တစ်ခုထိုးထွင်းသိမြင်မှု
ရှေးရှေးတုန်းက, ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဂေါက်သီးအားလုံးဗြိတိသျှခဲ့ကြသည် ‘ များသောအားဖြင့်စကော့တလန်. နှစ်ဆယ်ရာစုအစောပိုင်းကတည်းက, သော်လည်း, ဦး ဆောင်ဂေါက်သီးသမားအများစုသည်အမေရိကန်များဖြစ်ကြသည်. ဒီအတွက်ကြောင့်, ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲသည် PGA ဖြစ်သည် (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂေါက်သီးအသင်း) ။ ည့်သည်, အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမေရိကန်ဂေါက်ကွင်းပေါ်တွင်ကျင်းပဖြစ်ရပ်များတစ်စီးရီး. ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဂေါက်သီးကစားသည့်နေရာဖြစ်သည်, တစ်သန်းနီးပါးဒေါ်လာ၏ထိပ်တန်းဆုသည်, ရာနဲ့ချီတဲ့သေးငယ်တဲ့ဆုချီးမြှင့် ('ပိုက်ဆံအိတ်', ဂေါက်သီးဗန်းစကားထဲမှာ). ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဂေါက်သီးအချိန်ပြည့်ကစားသူနည်းပါးသည်, ဒါပေမယ့်ထိပ်တန်းကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာစေနိုင်သည်, နှင့်ထိပ်တန်းရာပေါင်းများစွာသောအနည်းဆုံးအားလုံးကျိုးနွံလူနေမှုလုပ်နိုင်ပါတယ်, ဂေါက်သီးဆုငွေကိုခွဲဝေပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. PGA Tour အဖြစ်အများအားဖြင့်အမေရိက၌ကျင်းပသည်, ဥရောပခရီးစဉ်သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအမေရိကန်မဟုတ်သောဂေါက်သီးသမားများနှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်, နှင့်ယခုကျယ်ပြန့်နံပါတ်နှစ်နှစ်ခုပြိုင်ပွဲဖြစ်စဉ်းစားသည်. အခြားအရေးကြီးသောပြိုင်ပွဲများမှာဖွင့်ပွဲများဖြစ်သည်, US Open နှင့် British Open အပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်. Tours သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂေါက်သီးသမားများအတွက်သာဖြစ်သည်, ၀ င်ခွင့်ကိုမည်သူမဆိုဖွင့်နိုင်သည်, ဆိုလိုတာကနှစ်ထောင်ချီတဲ့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ကံကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကြိုးစားကြနိုင်တယ်, နောက်ပြီးနောက်မျိုးဆက်ဂေါက်သီးသမားတွေကအလွယ်တကူစတင်နိုင်ပါတယ်. နှစ်စဉ်ဖွင့်လှစ်သူများသည် Tours သို့ဖိတ်ကြားခံရလိမ့်မည်, လာမယ့်အဆင့်မှာယှဉ်ပြိုင်ရန်, ဒါပေမယ့် Tour အပြစ်တွေကို Opens ထဲမ ၀ င်အောင်တားဆီးတာဘာမှမရှိဘူး, နှင့်အများဆုံးလုပ်ပါ. ဤရွေ့ကားဂေါက်သီးပြိုင်ပွဲများ၏အကျော်ကြားဆုံးသာဖြစ်ကြသည်: သေးငယ်မရှိရှားပါးမှုရှိပါသည်, လွတ်လပ်သောပြိုင်ပွဲ, နှင့်ကြီးမားသောဂေါက်သီးကစားနိုင်ငံများတစ် ဦး ချင်းစီကိုယ်ပိုင်ရှိပါတယ်. အမေရိကန်သို့မဟုတ်ဗြိတိသျှမဟုတ်သောဂေါက်သီးသမားများသည်သူတို့၏တိုင်းပြည်၏သေးငယ်သည့်ပွင့်လင်းပြိုင်ပွဲတွင်ပထမဆုံးကစားခြင်းဖြင့်တိုးတက်လိမ့်မည်, ပြီးတော့ပိုကြီးတဲ့ဖွင့်လှစ်ဖို့အပေါ်ရွေ့လျား, မျှော်လင့်ကြီးတွေ Tours များထဲမှလက်ခံခဲ့သည်ခံရမီ. ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ – တစ်ခုထိုးထွင်းသိမြင်မှု
ဓာတ်ငွေ့သုံးဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေနေသည်, လျှပ်စစ်သို့မဟုတ်ဆွဲလှည်း? သင်လမ်းတစ်လျှောက်လှည့်ပတ်ကူညီရန်ဂေါက်လှည်းများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်. သင်၏အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်ကိုအပြည့်အ ၀ အသုံးချနိုင်ရန်သင်၏ပစ္စည်းကိရိယာများကိုသယ်ဆောင်ရန်အတွက်ဂေါက်သီးလှည်းများသို့မဟုတ် dureable pull cart လိုမျိုးမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးလိုချင်သည်။. Yamaha နှင့်အတူ Ez-go ဂေါက်လှည်းများကိုလူသိများပြီးမကြာခဏလျှပ်စစ် (သို့မဟုတ်) ဓာတ်ငွေ့သုံးမော်ဒယ်များဖြင့်လာသည်။. သင်ရှာဖွေနေသောအရာပေါ်မူတည်သည်, some players enjoy the value of used golf carts as often they are pricedalittle more affordable. Golf carts are an absolute necessity for those more challenged terrain courses. There are many advantages when using golf carts. These include the ability to carry your clubs, snacks, beverages and stay drier in poor weather conditions with all weather enclosure features. Custom golf carts are very stylish. You can create the ideal image or machine that suits your needs. Lots of consumers taylor make their own vehicles. Quite often the popular choice are used golf carts. The availability is absolutely amazing. The features that these machines come out with is truly endless. You can easily customize your golf cart to match your personality. Golf carts are the ideal utility for the avid golfer. Take advantage of custom golf carts as they allow you to design your ideal vehicle. Ez-go, Yamaha, Club car are all top name brands. You can either review new sources or used golf carts. The convenience factor is worth looking at. Just imagine the benefits that come withagreat utility cart buggy. We understand that many consumers have different needs, and an endless list of golf cart accessories is usually not too much farther thanaclick away. Improve your game enjoyment with the added convenience of your very own golf cart. ဂေါက်လှည်းသည်အကောင်းဆုံးဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းကိုခံစားသည်
မိုနာကို Grand Prix 2006 & Kimmi Raikkonen
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကချန်ပီယံ Kimmi Raikkonen သည်ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးလမ်းတိုက်နယ်ဆုကိုနောက်တစ်ကြိမ်အနိုင်ရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်: လာမည့်တနင်္ဂနွေနေ့၌ကျင်းပမည့် Monaco Grand Prix 28. F1 လေယာဉ်မှူးတိုင်းသည် F1 ပြက္ခဒိန်၏အကျော်ကြားဆုံးပြိုင်ပွဲကိုအနိုင်ရလိုကြသည်, ကအနှေးဆုံးနှင့်အခက်ခဲဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းက, ၎င်း၏ကျဉ်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်, နှင့်ကပြန်တယ်နှင့်ပွေီးမှအပြည့်အဝဆိုတဲ့အချက်ကို. ဒီအတွက်ကြောင့်, လေယာဉ်မှူးများကအခြားကားများကိုအလွန်အကျွံယူပြီးအမှားများကိုဝေဖန်နိုင်သည်. အကျိုးဆက်, ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်ချက်သည်ကောင်းမွန်သောဇယားကွက်အနေအထားရှိရန်လိုအပ်သည်. စပိန်အသင်းမှဖာနန်ဒိုအလွန်းနှင့်မိုက်ကယ်ရှူးမာချာတို့သည်နောက်ဆုံး Formula One ပြိုင်ပွဲများတွင်ရိုင်ကွန်းနင်နှင့်သူအသင်းသားများနှင့်အတူအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။: McLaren- မာစီဒီးကြောင်းကံကောင်းခဲ့ကြပြီမဟုတ်. ၏နှစ်အကြား 1984 နှင့် 1993 McLaren ကားတစ်စီးသည်ကိုးနှစ်အတွင်းရှစ်ကြိမ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်, Ayrton Senna နှင့်အတူ (ဘရာဇီး) နှင့် Alain Prost (ပြင်သစ်) လေယာဉ်မှူးအဖြစ်. ပြီးခဲ့သည့်တကျိပ်နှစ်ပါးလူမျိုးကနေပေမယ့်, အဖွဲ့ McLaren- Mercedes လေးကြိမ်သာအနိုင်ရရှိခဲ့သည်. ပြီးခဲ့သည့်တစ်နှစ်က Raikkonen မှနောက်ဆုံးအောင်ပွဲကိုရရှိခဲ့သည်. ယေဘုယျအနေဖြင့်, Monaco Grand Prix တွင်အမြန်နှုန်းသည်မြင့်မားသည်. ကျော်ကြားသောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသို့ရောက်သောအခါကားများသည်အမြင့်ဆုံး 290kph အထိရောက်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ရင်ခွင်အဘို့အမြန်နှုန်း 145kph ထက်နည်းသည်. ထို့ကြောင့်အင်ဂျင်နီယာများသည်ယာဉ်၏မြန်နှုန်းနိမ့်ကျမှုကိုကိုင်တွယ်ရမည်. ပြိုင်ပွဲရဲ့အကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ် 78 သောက်နှင့်တိုက်နယ်အရှည်ဖြစ်ပါတယ် 2.075 မိုင် (3.340 ကီလိုမီတာ). မိုနာကို Grand Prix ကိုတက်ကြွစွာနေ့ပြီးနောက်နောက်တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်အမြဲကျင်းပလေ့ရှိသည်. မိုနာကို Grand Prix 2006 & Kimmi Raikkonen
တစ် ဦး အသုံးအဆောင်ရေကူးကန်စားပွဲပေါ်မှာဝယ်ယူ
အသုံးပြုတဲ့ရေကန်စားပွဲများကိုမကြာခဏရရှိနိုင်ပါသည်. အရောင်းလှုပ်ရှားမှုအတွက်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာကဏ္ classified ကိုကြည့်ပါ, ခြံအရောင်း, အိမ်ခြံမြေရောင်းအား, နောက် ... ပြီးတော့. သငျသညျနောက်ဆုံးမှာတစ်ခုခုဖြတ်ပြီး run ဖို့သေချာပါတယ်. အသုံးပြုရေကူးကန်စားပွဲအဘို့အစျေးဝယ်တဲ့အခါ, သင်ကရေကန်စားပွဲအသစ်တစ်လုံးဝယ်နေလျှင်သင်လိုချင်သည့်မေးခွန်းများအားလုံးကိုမေးပါ. ဒါကအရွယ်အစားဘယ်လောက်ပါလဲ: 7, 8, ဒါမှမဟုတ်9ပေ? ကိုယ်ခန္ဓာကဘာလဲ, အိပ်ရာ, နှင့်ထဲကအထည်? ခန္ဓာကိုယ်အစိုင်အခဲသစ်သားသို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းတစ်ခုထက်ပို။ အပိုင်းအစများကဖန်ဆင်းထားသည်ဆိုပါက, wear နဲ့မျက်ရည်များအတွက်ဆက်သွယ်မှုကိုစစ်ဆေးပါ. စားပွဲကဘယ်လောက်ကြံ့ခိုင်သလဲ? စားပွဲအောက်သို့တွားသွားပြီးကြည့်ပါ, သင်တစ် ဦး ကားစက်ပြင်လျှင်အဖြစ်. စားပွဲဘေးတွင်မတ်တပ်ရပ်။ လှုပ်ခါခြင်း (သို့) နှစ်ခုပေးပါ, ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်, နှင့်အခြမ်းမှ. သင်နှင့်လက်သမားအဆင့်ယူပါ. တောင်မှမြေပြင်ပေါ်တွင်စားပွဲထားပါ (အဆင့်နှင့်အတူ gauged အဖြစ်) နှင့်အဆင့်နှင့်အတူအိပ်ရာစမ်းသပ်ပါ. ရေကူးကန်ဂိမ်းနှစ်ခုကိုရိုက်ပါ. အရေးယူမှုဘယ်လိုခံစားရသလဲ? အဆိုပါခံစားမှုအတွက် inconstancies အားဖြင့်ဆီးတားဘောလုံးကိုလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်, မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်ကူအတွက်ဖြစ်စေ? ကူရှင်များမည်မျှကောင်းကောင်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်သနည်း? သူတို့မှာနူးညံ့တဲ့အစက်အပြောက်ရှိလား? သူတို့ဘယ်နေရာမှာမဆို sagging နေကြသည်? ထို့အပြင်, အိပ်ရာ slate တ ဦး တည်းအစိုင်အခဲစာရွက်များ၏ရှိမရှိမေးပါ, သို့မဟုတ်နှစ်ခုလိုင်းများတလျှောက်ကစားမျက်နှာပြင်တွန့်နိုင်ကြောင်းသုံးကဏ္intoများသို့ခွဲခြား? သင်ကိုယ်တိုင်၎င်းကိုစမ်းသပ်နိုင်သည်။ စားပွဲကိုဖြတ်ကူးသည့်အပိုင်းကိုအပိုင်းသုံးပိုင်း ခွဲ၍ ထားပါ. သငျသညျထုခံစားမိလျှင်, ဖြစ်ကောင်းဒီအသုံးပြုရေကူးကန်စားပွဲပေါ်မှာသင်တို့အဘို့မဖြောင့်သည်. ကောင်းမွန်သောအသုံးပြုသောရေကန်စားပွဲတစ်ခုသည်ဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ မဟုတ်ဘဲရာနှင့်ချီ။ ကယ်တင်နိုင်သည့်အလွန်ကောင်းသောရှာဖွေမှုဖြစ်သည်. တစ် ဦး အသုံးအဆောင်ရေကူးကန်စားပွဲပေါ်မှာဝယ်ယူ
သင်၏ Scuba Crew အတွက် Etiquette ကိုတင်ပေးခြင်း
မမေးပါနဲ့. အဖြေမှာကျယ်လောင်သောအသံဖြစ်သည် “ဟုတ်တယ်”! သင် tip လုပ်သင့်ပါတယ်. သင်တစ် ဦး Chartered နှင့်စီးပွားဖြစ်ရေငုပ်ဆိုင်ကတဆင့်ငုပ် chaperoned သည့်အခါ, ၎င်းသည် Captain နှင့် DiveMaster နှစ်ခုစလုံးကိုမှတ်သားရန်ထုံးစံဖြစ်သည်. လှူဒါန်းမှုဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်ကြသည်, သင့်ရဲ့ရက်ရောမှုအပေါ်လက်ရှိ. သော်ငြားလည်း, သင်၏ scuba သင်္ဘောသားအတွက်အကြံပေးချက်တစ်ခုပေးသင့်သည်. သင်တစ်နေ့ထွက်သွားလျှင်, လှေပေါ်မှာငွေပို့ဖို့အရေးကြီးတယ်. သငျသညျတစျခုလုံးကိုတစ်ပတ်လုံးအတူတူ DiveMaster နှင့်ဗိုလ်ကြီးနှင့်အတူရေငုပ်နေတယ်ဆိုရင်, ရက်သတ္တပတ်၏အဆုံး၌အစွန်အဖျားတစ်ခုကမ်းလှမ်းရန်လက်ခံသည်. သင်တစ် ဦး ငုပ်ဆိုင်မှတဆင့်အမျိုးမျိုးသောငုပ်စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, သင့်တွင်ရေငုပ်တစ်ခုစီတွင် Captain သို့မဟုတ် DiveMaster တူညီမည်မဟုတ်ပါ, ထို့ကြောင့်သင်၏အမှုထမ်းသည်သင်၏နေထိုင်မှုကာလတစ်ခုလုံးအတွက်တစ်သမတ်တည်းဖြစ်လိမ့်မည်ကိုသင်သေချာမသိပါကနေ့စဉ်ခုန်။ ပို့ခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်. ရှုထောင့်တစ်ခုမှာ Captain နှင့် DiveMaster တို့၏အခန်းကဏ္tကိုမျှော်လင့်ထားသည့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်ဖြစ်သည်. သင်၏ကပ္ပတိန်သည်တက္ကစီမောင်းသူနှင့်တူသည်, သင့်ရဲ့ scuba ဦး တည်ရာမှနှင့်မှလုံခြုံစိတ်ချစွာသယ်ဆောင်. အငှားယာဉ်မောင်းများအတွက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်အချက်မှာ 10% ရန် 15% ခ; ဗိုလ်ကြီးများအတွက်အလားတူနှုန်းသည်သင့်လျော်သည်. တစ်ခုတည်း - အကြံပေးအဖွဲ့ငုပ်တွင် $65, ဗိုလ်ကြီးရန်သင်၏အစွန်အဖျားဖြစ်သင့်သည် $6 နှင့် $9 ယူအက်စ်ဒီ. သင်၏ DiveMaster ကိုပိုမိုရက်ရောစွာတင်သင့်သည် 15% – သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်, ဝန်ဆောင်မှုခြွင်းချက်ခဲ့လျှင်. တစ် ဦး အပေါ် $65 Single-tank ငုပ်, သင့်ရဲ့ DiveMaster အကြား tip $8 နှင့် $12 ယူအက်စ်ဒီ. ပြည်တွင်းငွေကြေးပြောင်းလဲမှုကြောင့်သင်၏အစွန်အဖျားကိုမချွေတာပါနှင့်. အကယ်၍ သင်သည်ရှက်ဖွယ်ကောင်းသောငွေလဲနှုန်းရှိသောဒေသတစ်ခုတွင်ခရီးသွားနေပါက, ပြည်တွင်းစီးပွားရေးကစျေးပေါတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အကြံအစည်ကိုမလျှော့ချပါနဲ့. ဖလော်ရီဒါရှိလှေဗိုလ်ကြီးရန်, $15အမေရိကန်ဒေါ်လာသည်ခရီးစဉ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလက်ခံနိုင်သောအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်. ကျေးလက်ဟွန်ဒူးရပ်စ်အတွက်ဗိုလ်ကြီးရန်, $15အမေရိကန်ဒေါ်လာသည်ရက်ရောသောလက်ဆောင်ဖြစ်သည်. သူတို့လိုအပ်သည့်နေရာတွင်သင်၏ရက်ရောသောလက်ဆောင်များကိုပေးပါ ‘ စီးပွားရေးစိန်ခေါ်မှုများရှိသောဒေသများတွင်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသော DiveMasters သို့ t. အချို့သောသင်္ဘောသားများသည်များသောအားဖြင့်များများစားစားရှိကြသည်ကိုသတိရပါ, တခါတရံအားလုံးနီးပါး, gratuities ကနေသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေ. အေးမြပါ, နှင့်ရေငုပ်အပေါ်စောင့်ရှောက်လော့! သင်၏ Scuba Crew အတွက် Etiquette ကိုတင်ပေးခြင်း
ဂေါက်သီးကိုစကော့တလန်တွင်တီထွင်ခဲ့သည်, နှင့်အနည်းဆုံး 17 ရာစုမှစတငျ, ဖြစ်နိုင်သည်ပင်အစောပိုင်းက ‘ နာမကို Old ဂျာမန်စကားလုံးကနေလာသည်ဟုယုံကြည်ရသည်, ဂိုး, ကလပ်သို့မဟုတ်လင်းနို့အဓိပ်ပာယျ. ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံးဂေါက်ကွင်းသည် Musselburgh Links ဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်အများကြီးစကော့တလန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဂေါက်ကွင်းဟောင်းရှိပါတယ်, အကျော်ကြားဆုံးစိန့်. Andrews က. ယနေ့ဂေါက်ကွင်းတွင်အကြောင်းပြချက်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ရသည် 18 တွင်းကစိန့်. Andrews သည်ကိုးယောက်သာအခန်းရှိသည်, but the early golfers decided to play the course through twice each time. Golf’s Scottish origin isamatter of some controversy among the Dutch, the Chinese and the French, who all claim that they had much similar club-and-ball games much longer ago. While there is no doubting they did, သို့သော်, it seems clear that there is more to golf than just the club and the ball, and that golf as it is played today was at least perfected, if not entirely invented out of thin air, in Scotland. ထိုကတည်းက, little has really changed about the game. The grass has got shorter and smoother, as lawnmower technology has improved, the wooden clubs have been replaced with metal ones, and the balls have been improved by the addition of rubber, but that’s about it. It wasn’t until the 20th century, သို့သော်, that golf really started to spread all over the world. There were no golf courses in China until 1985, but now there are more than 200. Since the Second World War, golf has become insanely popular in Japan, even though they don’t really have the space to build the courses ‘ they have become pioneers of indoor and virtual golf. ဒီနေ့, it is thought that there are over 30,000 golf courses in the world ‘ that’s well overahundred for every country, although some countries obviously have far more courses than others, particularly in the English-speaking world. ဂေါက်သီးကိုစကော့တလန်တွင်တီထွင်ခဲ့သည်ကိုသင်သိပါသလား?
ငါးဖမ်းခြင်းအမျိုးအစားသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေငါးဖမ်းခြင်းသည်ငြိမ်းချမ်းပြီးအားတက်စရာအားကစားဖြစ်သည်. ကောင်းပြီ, ချွင်းချက်တစ်ခုဖြင့် ‘ grunion ပြေး. El Grunionino တစ်နှစ်လုံးလုံး, ဆန်ဒီယေဂိုနှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းတို့တွင် grunion ဟုခေါ်သောငါးသည်ငါးဖြစ်သည်. ဤသည်ငွေနည်းနည်းငါးငါး by ပြေးခြင်းဖြင့်မျိုးပွား’ ညဉ့်အလယ်၌ဒီရေတက်နေစဉ်အတွင်းကမ်းခြေတက်. စာသားအတိုင်းထောင်ပေါင်းများစွာသောငါးများသည်ရိုးရှင်းစွာကမ်းခြေကိုလှိုင်းများဖြင့်စီး။ သူတို့၏ဥများကိုစိုစွတ်သောသဲ၌တင်ရန်လာကြသည်. It kind of looks like the beginning ofatriathalon except the participants are going the wrong way and are pregnant. The fish picked up their name from Spanish settlers because of, ကောင်းပြီ, the grunting noise the make when doing their thing. It isabit saucy now that I think about it. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, the grunion averages five inches in length and hasasilvery hue that shows in the moonlight. With thousands in the water, it looks like theareally fat person wearing way to many sequins while dancing to disco music. You’re Inner Barbarian ‘Fishing’ for grunion requires you to get in touch with your inner barbarian. Under California law, you are not allowed to use bait, ချိတ်, poles, nets or anything. အဲဒီအစား, you must physically catch the grunion with your hands. ဒါ, ဒါပေါ့, results in you and others running around the beach likeacrab while trying to snatch the grunions. They are exceedingly quick and slippery. You’ll be huffing and puffing before you know it. Grunion are an extremely plentiful fish, but there are still rules to follow. အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, you have to go mano-a-fisho. No poles, nets or other items can be used. ဒုတိယ, you have to getafishing license from the California Department of Fish and Game. တတိယ, you can only go grunion hunting from May to September, the legal season in the area. If you think getting in touch with your inner fishing barbarian sounds likeagood time, here is the scoop on good spots. In San Diego, you should hit the beaches in Del Mar, La Jolla, Mission Beach or in front of the Hotel Del Coronado. These are all high end areas, which means the grunion must have excellent taste. Running around the beach likeamadman can be tiring. Bringing along fluids [အိုကေ, beer] is highly recommended. Grunion ပြေးသည် ‘ San Diego မှသင်၏လက်နှင့်အတူငါးဖမ်း
တောင်တက်ရန်, ကြောင်းဖော်ပြထားဟောင်းနွမ်းအလေးချိန်ရှိပါတယ် “တက်ခြင်းသည်တောင်တက်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်သည်,’ များစွာသောအားဖြင့်တောင်တက်ခြင်းပြင်ပ၌လေ့ကျင့်ခြင်းမလုပ်ရန်ဆင်ခြေပေးလေ့ရှိသည်. ငါရှင်းပြပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဒီအတွေးအခေါ်နှင့်အတူသဘောမတူ. တောင်တက်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောအတတ်ပညာအတိအကျကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအခါ, ဘယ်လိုနှင့်ဘယ်အချိန်ခြေလှမ်းဖို့, တောင်တက်နည်းစနစ်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု, သူ့ဟာသူတက်ခြင်း၏လှုပ်ရှားမှုအတွက်အစားထိုးမရှိပါ. သို့သော်, ထိုကဲ့သို့သောဆုပ်ကိုင်အင်အားတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အထက်ခွန်အားနှင့်ခံနိုင်ရည်တောင်တက်အဖြစ်တောင်တက်ခြင်း၏အားကစားမှတိကျတဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုအဆင့်ဆင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ရန်အတွက်အလွန်ကန့်သတ်သို့မဟုတ်ရလဒ်များကိုသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုပင်ရလဒ်များကိုပါလိမ့်မယ်. တောင်တက်ခြင်းအားဖြင့်လေ့ကျင့်ခြင်းအတွက်မသင့်တော်သည့်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာရှုံးနိမ့်ခြင်းအားတက်ခြင်းသည်ရွေးချယ်စရာမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်. သင်တက်စဉ်ကြွက်သားပျက်ကွက်မှုရှိပါက, ဒါကြောင့်အလွန်ကောင်းစွာဆိုးဝါးသက်သေပြလိမ့်မည်. ဒါကြောင့်လုံးဝရှောင်ရှားရန်အိုင်ဒီတက်နေစဉ်ရည်မှန်းချက်. တစ်နည်းအားဖြင့်, တ ဦး တည်းတောင်တက်ဘို့အစွမ်းသတ္တိကိုလေ့ကျင့်အခါ, လူတစ် ဦး သည်ကြွက်သားကျရှုံးမှုကိုအမှတ်ရစေလိုပြီး၎င်းသည်လုပ်ရပ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်၏စွမ်းအားကိုတိုး။ ဖိအားနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။. ဒါကြောင့်ဒီနည်းလမ်းနှစ်ခုဟာအပြန်အလှန်သီးသန့်ရှိနေပြီးတစ်ယောက်တည်းတက်ခြင်းအားဖြင့်ဘယ်တော့မှအမြင့်ဆုံးခွန်အားကိုဘယ်တော့မှရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး. တောင်တက်ခြင်းနှင့်တောင်တက်ခြင်းအတွက်လေ့ကျင့်ပေးမှုကြားကွာဟမှုကိုအားဖြည့်စေသောနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုမှာကျောက်ကိုသင်ကိုင်တွယ်ခြင်းဖြစ်သည်. တောင်တက်ရန်, ကျောက်တုံးသည်အမျိုးမျိုးသောဆုပ်ကိုင်ရာထူးအမျိုးမျိုးကိုကျပန်းအမျိုးမျိုးအသုံးပြုရန်တောင်တက်သမားကိုတောင်းဆိုသည်, တစ်ခါတစ်လေ, သင်ကျောက်ကိုကိုင်တွယ်ပုံကိုပင်တမင်တကာပြောင်းလဲနိုင်သည်. ရလဒ်အနေဖြင့်, ဒါဟာမဆိုတစ်ခုတည်းချုပ်ကိုင်အနေအထားအစဉ်အဆက်အကျယ်ချဲ့နှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရလိမ့်မည်ဟုမဖြစ်နိုင်ပါပဲ, ထို့ကြောင့်, တစ် ဦး ချင်းစီချုပ်ကိုင်ရာထူး (ဥပမာ၊. သောင်းကျန်းသူ, ပွင့်လင်းလက်, ဆိတ်, စသည်တို့) အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်ဖို့နှေးကွေးဖြစ်ကြသည်. တောင်တက်ရာသီတစ်ခုသည်သင်၏ anerobobic ခံနိုင်ရည်ကိုအဘယ်ကြောင့်တိုးတက်စေနိုင်ကြောင်းဤအချက်ကသင်နားလည်သင့်သည် (i.e. အစွမ်းသတ္တိ၏ခံနိုင်ရည်), ဒါပေမယ့်သင်အကြွင်းမဲ့အာဏာအများဆုံးဆုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်ဖို့အနည်းငယ်လုပ်ပါ. ထို့ကြောင့်, ကွဲပြားချုပ်ကိုင်ထားရာထူးစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်တက်တဲ့အခါမှာခံနိုင်ရည်တိုးမြှင့်များအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောမဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အများဆုံးဆုပ်ကိုင်အစွမ်းသတ္တိကိုလေ့ကျင့်ဘို့အဘယ်တော့မှလိမ့်မည်. ထိရောက်သောလက်ချောင်းလေ့ကျင့်မှုသည်သင့်အားသတ်သတ်မှတ်မှတ်နေရာတစ်ခုကိုပစ်မှတ်ထားပြီးပျက်ကွက်သည်အထိလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်, မသာတောင်တက်ပတ်ဝန်းကျင်၌သာလုံခြုံစွာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်. နောက်ဆုံးတော့, တောင်တက်သမားအချို့သည်အထူးသဖြင့်အားကစားနှင့်မဆိုင်သောအခြားလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်လေ့ကျင့်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းကပိုကောင်းသည်. ဥပမာအနေဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်လိုအပ်သူတစ် ဦး သည်ကိုယ်ခန်ဓာပိုလျှံမှုကိုလောင်ကျွမ်းရန်အတွက်အေရိုးဗစ်လှုပ်ရှားမှုများကိုပြုလုပ်ရန်မတက်နိုင်သည့်အချိန်အများစုကိုအသုံးပြုသင့်သည်။. တစ်စုံတစ် ဦး ကအနည်းဆုံးကြံ့ခိုင်ရေးအနည်းဆုံးအချို့ကိုအနည်းငယ်လုံးလုံးမရှိလျှင်, ၎င်းတို့သည်ခွန်အားနှင့်အေရိုးဗစ်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေမည့်တိုက်နယ်လေ့ကျင့်မှုအချို့ကိုပြုလုပ်ခြင်းကပိုကောင်းသည်. ပိတ်ပွဲမှာငါတောင်တက်၌သင်၏အတှေ့အကွုံအဆင့်ကိုမည်သို့ပြောပါလိမ့်မယ်, သင့်ရဲ့ regimen တွင်အထူးပြုစွမ်းအားလေ့ကျင့်ခြင်းများပါဝင်ခြင်းဖြင့်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုကိုသင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်. တောင်တက်ခြင်းအတွက် RuggedSportsGear.com Strength Training တွင်သင်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းအားလုံးကိုရယူပါ
အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူထုပ်ပိုး: အဆိုပါ Humminbird Matrix 37 ငါးရှာစက်
သငျသညျငါးဖမ်းရှာဖွေရေးကိရိယာများအတွက်သင်လိုအပ်သမျှ, အဆိုပါ Humminbrid Matrix 37 တစ် ဦး အန္တိမစက်ဖြစ်ပါတယ်. ၎င်းသည်သင့်အားငါးဖမ်းသမားတိုင်းလိုအပ်တာကိုဖြည့်ပေးသည်. ဒါက, မျက်နှာပြင်အောက်တွင်ဖုံးကွယ်နေသည်အရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအမြင်, ပင်လယ်ကြမ်းပြင်နှင့်ထိုငါးများပုန်းအောင်းနေသည့်နေရာကိုကြည့်ပါ. ဤအရာအားလုံးသည်သင့်အားအကြီးဆုံးငါးကိုဆွဲယူရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်, အဆိုပါဆုငါး, နှင့်သင်ပြီးနောက်ဖြစ်ကြောင်းတိကျတဲ့ငါးပင်. ဒီနေရာမှာ Matrix စေအင်္ဂါရပ်အချို့ကို 37 ယနေ့စျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခု. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, အဆိုပါ Matrix 37 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာကိုရုံအမြင်ထက်ပိုပေးထားပါတယ်. ၎င်းသည်သင့်အားအောက်ဖော်ပြပါပုံစံများ၏ရှင်းလင်းသောရုပ်ပုံများကိုဖော်ပြပေးသည်. ပြီးတော့, မင်းကိုပေးတယ် 90 ဒီဂရီinရိယာ၌ရှိသောအရာကိုကြည့်ပါ. အောက်တွင်, ကျန်ခဲ့တယ်, နှင့်မှန်တယ်, သငျသညျပင်လယ်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာဖုံးကွယ်နေသည်အဘယ်အရာကိုမြင်လိမ့်မယ်. ၎င်းသည်သင့်အားမျက်နှာပြင်အောက်ရှိအဆောက်အအုံများကိုရှာဖွေရန်အခွင့်အလမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, ထိုဒေသတွင်ပုန်းအောင်းငါးကိုရှာဖွေရန်, ပြီးတော့ခင်ဗျားတစ်ဖက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာကြည့်ဖို့လည်းလိုတယ်. Matrix 37 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တန်းဖြစ်ပါတယ်, သုံးဆအကြိမ်ရေ Quadra Beam ကို Sonar. မယုံနိုင်စရာ 640 ဒေါင်လိုက် pixels နှင့် 320H Ultra high definition ငါးလက်မ display ဖြစ်သည်, ခင်ဗျားဟာတကယ်ကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ရုပ်ပုံလွှာတစ်ခုရမယ်. ဤအရာသည်သင့်အားပင်လယ်ကြမ်းပြင်အပေါ်အကျိုးအရှိဆုံးမြင်ကွင်းကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်. သတိရပါ, ပုံဟာပိုကောင်းလေလေ, သင်၏အခွင့်အလမ်းများကသာလွန်ကောင်းမွန်သောငါးများကိုမျက်နှာပြင်အောက်တွင်နေရာ ချ၍ သူ့ကိုအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်. ဒါပေမယ့်, သော Matrix အားလုံးမဟုတ်ပါဘူး 37 ကမ်းလှမ်းချက်များ. ဒီအရာတွေတစ်ခုတည်းကအဲဒါကိုအကောင်းဆုံးငါးရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒီမော်ဒယ်အပေါ်ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းများနေဆဲရှိပါတယ်. GPS ကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊, သင်၏တည်နေရာကိုကောင်းစွာထောက်ပြလိမ့်မည်. ဘယ်လောက်ဝေးပင်လယ်ထဲကိုရောက်ချင်နေပါစေမင်းသွားချင်တယ်, သင်ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာသိလိမ့်မယ်. အဲဒါသင်တန်းပါ, အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးလျင်မြန်စွာဖြုတ်။ လျင်မြန်စွာဖြုတ်တပ်နိုင်သည့်အတွက်အသုံးပြုသည်. အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးဤမျှလောက်များစွာသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူထုပ်ပိုး, အဆိုပါ Matrix 37 သငျသညျအိမ်သို့အခါတိုင်းငါးအပြည့်အဝအေးကိုရောက်စေဖို့လိုအပ်သမျှကိုကမ်းလှမ်း. အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူထုပ်ပိုး: အဆိုပါ Humminbird Matrix 37 ငါးရှာစက်